Izindaba - Khuluma nefektri esezingeni lomhlaba iManitowoc futhi nikhulume ngekusasa sindawonye!
Ekuseni ngoSepthemba 3, uMnu Lei Wang, Iphini Likamongameli Ophakeme Wezimakethe Eziqhamukayo zeManitowoc Tower Machinery Business and President of China Region, kanye neqembu lakhe bamenywa ukuba bavakashele uGrace.
La maqembu womabili abe nokushintshana okujulile nokunomdlandla ekukhiqizeni okuncikile ekukhiqizeni okuthuthukile, ekuphatheni ikhwalithi, ekuthuthukisweni kwemikhiqizo nasekuthuthukisweni kwamakhono.
Njengomholi embonini ye-crane emhlabeni, uMnu.Wang wethule imininingwane eninginingi ngenqubo yokuthuthukiswa kokukhiqizwa kwemikhiqizo kaManitowoc. Eminyakeni emithathu eyedlule, imboni ye-crane crane yaseChina ibisesezingeni eliphansi lokukhuphuka. Ngaphansi kwezimo ezinzima kanjalo nangaphansi kwemikhiqizo yamaShayina ekhulayo, akusiwona umsebenzi olula ukuletha uphawu lomhlaba wonke olungenathemba emzileni ofanele.
KwiManitowoc, izinguquko eminyakeni emithathu edlule azilula. UMnu Wang, olunge kakhulu ekufuneni amathuba ezimweni ezisebenza ngokweqile, wenza imizamo emikhulu yokwenza ushintsho. Ngokuya ngesisekelo sokukhiqiza esibaluleke kakhulu emhlabeni sikaManitowoc-iZhangjiagang Factory, uqondise ifilosofi yakhe yebhizinisi eyimpumelelo esikhathini esedlule, kufaka phakathi imisebenzi emincane ebandakanya bonke abasebenzi, nezidingo zamakhasimende. Ukuthuthukiswa kokuklanywa komkhiqizo kwenkampani kwaqaliswa ngokushesha eManitowoc, futhi kwahlanganiswa nesifunda sase-Asia-Pacific kanye nemakethe yaseChina. Iminyaka emithathu edlule izuze imiphumela emangalisayo.
Ukuqaliswa, ukugxila emininingwaneni kanye nemisebenzi ephezulu ephezulu kubo bonke abasebenzi, hhayi kuphela evuselele amandla amahle abasebenzi, kepha futhi yahlanganisa isinyathelo nentshiseko. Isipiliyoni esinqwabelene kanye nokwakhiwa kobuhlakani bezisebenzi, kwengeze izincazelo eziningi ngokwenqubo yokukhiqiza, inqubo yokukhiqiza, amathuluzi kanye namathuluzi wefektri ehlakaniphile futhi ezenzakalelayo eZhangjiagang. Imisebenzi emincane eyenziwe efemini yaseZhangjiagang eminyakeni yamuva inike amandla iManitowoc Potain ukuthola izinzuzo ezivela kule mboni. Ukulawulwa kwekhwalithi, ukusebenza kahle kokukhiqiza, okukhiphayo endaweni ngayinye yeyunithi, nezindleko zokukhiqiza zithuthukisiwe ngokuqhubekayo.
Ukunamathela emoyeni wobungcweti wokuba "ngongcono kakhulu", uGrace uyaqhubeka nokufunda kokuzuziwe yizinkampani ezisezingeni lomhlaba, ukuthuthuka okuqhubekayo, ukuhlinzeka amakhasimende ngemikhiqizo esezingeni eliphezulu futhi esebenza kahle kuyindlela ecacile yokuthi uGrace athuthuke. "Faka amakhulu emifula embonini yolwandle, cabanga phambili uzuze ikusasa."